MUUQAAL: Wakiilka Itoobiya uFadhiya Garoowe oo Baarlamaanka , Khudbad ka Jeediyey maanta, Kana hadlay dagaalka magaalada Gaalkacyo!! | kowtharmedia.com
Home MUUQAAL MUUQAAL: Wakiilka Itoobiya uFadhiya Garoowe oo Baarlamaanka , Khudbad ka Jeediyey maanta, Kana hadlay dagaalka magaalada Gaalkacyo!!
MUUQAAL: Wakiilka Itoobiya uFadhiya Garoowe oo Baarlamaanka , Khudbad ka Jeediyey maanta, Kana hadlay dagaalka magaalada Gaalkacyo!!
Oct 29, 2016MUUQAAL
Garoowe (Kowtharmedia.com) Wakiilka Itoobiya ee Putland uFadhiya Magaalada Garoowe ayaa Maanta Khudbad ka jeediyey Xarunta Baarlamaanka Puntland, Wuxuuna ka hadlay dagaalada ka socda magaalada Gaalkacyo.
Wuxuu sheegay in Puntland ay dhinacyo badan dagaal uga Furan yahay, ” Waxaana Xaqiijinayaa in Puntland iyo shacabkeedu in ayna Aqoonin Gardarada, Arinta Dagaalka Gaalkacyo waanu Xalin doonaa, Rajo wayn ayaan Qabnaa, Waxaana idiin cadaynayaa in Itoobiya Bilowday inay dhexgasho Puntland iyo Galmudug” Ayuu yidhi.
Previous PostOdayaal iyo Ganacsato kasoo kala jeeda Maamulada Galmudug iyo Puntland Maxaabiis isku Wareejiyay!! Next PostDowlada isku taga Carabta oo casuuntay dhamaan Madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya iyo Madax heer Fidaraal!!